Arahina maso avokoa ny fahasalaman` izy ireo ary mahazo fitsaboana sahaza azy amin` izao, hoy hatrany ny fanazavana. Efa tamin` ny taona 2010 no nahitana mararin` ny Dengue tany Boeny. Azo tsaboina tsara ny aretina raha tonga ara-potoana eny amin` ny hopitaly ny marary iray. Ny fisorohana ny moka no zava-dehibe indrindra ialàna amin`ny aretina. Fandrarahana fanafody amin`ireo toerana maromaro sy fanentanana ny mponina hanala lobolobo ary fampiasana lay misy ody moka no fepetra noraisin` ny faritra hatrany. Tsara no manamarika fa tamin` iny herinandro lasa iny no nandray fanapahan-kevitra ny tomponandraikim-panjakana ao anivon` ny faritra Boeny fa hanakatona ny sisin-tany mampifandray amin'ny nosy Kaomoro. Nisy mantsy ny fitaovam-pitaterana botry ka ireny no arahina maso mba tsy hahafahan` ny olona avy any Kaomoro hiondrana any Mahajanga eo anatrehan` izay valanaretina hafahafa miseho any izay.